कांग्रेसमा किन आइरहेछ युवाको नेतृत्व ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
कांग्रेसमा किन आइरहेछ युवाको नेतृत्व ?
२०७८ असोज १८
पछिल्लो समय राजनीतिमा युवाको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । कांग्रेसको तल्लो संरचना वडा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा ५० बढी प्रतिशत युवा नेतृत्वमा आउन सफल भएका छन् । कांग्रेस सधैं बुढाखाडाको पार्टी भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला १४ औँ महाधिवेशनअन्तर्गत तल्लो तहको नेतृत्व चयनमा युवा पुस्ताको आर्कषण बढेको हो ।
भनौं पछिल्लो समय राजनीतिमा युवाहरूको चासो बढेको छ । जसले गर्दा यस अधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा युवाहरू आउन सफल भएका छन् । उनले अहिलेको अधिवेशनको परिणामले अब कांग्रेसलाई बुढाको मात्र पार्टी भन्ने आरोपले मिथ्या सावित गर्दै समेत लगेको छ । युवाहरूले राजनीतिप्रति देखाएको चासो र पार्टीका काममा खटिँदै आएको परिणाम अधिवेशनमा देखिँदै आएको छ । वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा युवाहरूको आगमनले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा थपिँदै गएको छ भन्न सकिन्छ । १९ वर्षदेखि ४० वर्षको उमेर समूहका युवाहरूले वडा हुँदै क्षेत्रको पनि नेतृत्व लिएका छन् ।
राजनीतिज्ञहरू युवाहरू नेतृत्वमा आउनुलाई राजनीतिमा आएको परिवर्तन ठान्छन् । तर, धमाधम युवाहरू राजनीतिमा आउँदा उनीहरूको योग्यता र क्षमताबारे चासो पनि बढ्न थालेको छ । पहिले व्यवस्थाका लागि लड्दाजस्तो खारिने मौका वा दायित्व अहिलेका युवामा छैन । तर, उनीहरूलाई देश र जनताका लागि दूरदृष्टिसहित काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ । राजनीति गर्न गहिरो अध्ययन चाहिन्छ । जसले, देश, काल, परिवर्तनसँगै विश्व राजनीतिक परिवेशबारे पनि उत्तिकै ज्ञान होस् । अहिले पार्टीले पढेलेखेका र सम्बन्धित विषयमा ज्ञान भएका सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पठाउनुपर्छ भनिरहँदा युवाहरु भने ऐन, नियम, कानुन बुझ्छन्, अध्ययन गर्छन् युवा नेतृत्वले नै देश हाँक्न सक्ने बताउँछन् । यसका लागि युवालाई सही बाटो दिन सक्नु आजको आवश्यकता हो । अब सही नेतृत्व र बाटो दिनुपर्छ ।
युवा शक्ति नै परिवर्तनका वाहक हुन् जसले असल समाज र राष्ट्र निर्माणमा सदैव महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । हरेक देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनमा यही शक्तिको जोस, जागर र आँटले क्रान्तिकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ । चाहे नेल्शन मण्डेला हुन् वा गान्धी हनु वा बिपी कोइराला उनीहरूकै युवा शक्तिको नेतृत्वले आफ्नो राष्ट्रको राजनीतिक परिवर्तन सफल भएका थिए । नेपाली कांग्रेस यो मुलुकको सबैभन्दा जेठो प्रजातान्त्रिक दल मानिन्छ । तर तुलनात्मक हिसाबमा अन्य दलमा भन्दा यसमा युवाहरूलाई भूमिका प्रदान गर्नुको सट्टा युवा कै बलमा पाका नेताहरू अगाडि बढिरहने प्रवृत्ति अझै पनि हाबी छ । यी पाका नेताहरूले युवाहरूलाई चुनाब जित्न, जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न र बुथको सुरक्षाको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा युवा नेता नै राजनीतिलाई शक्तिको फोहोरी खेल ठान्न बाध्य भएका छन् । जनतामा उत्साह भर्नकै निम्ति पनि १४औँ महाधिवेशनमा पुस्ता हस्तान्तरण पहिलो र अन्तिम सर्त हो । युवा नेतृत्वले नेपाली कांग्रेसको काँध थाप्नुपर्छ । अब पार्टीले नयाँ जीवन पाउनेछ । पारदर्शिता, इमान्दारिता र नैतिकतालाई नृत्यकर्म र सूत्र बनाउनेछ । अहिलेसम्म कांग्रेसमा सधैं हुने गरेको एउटा बहस हो, युवा पुस्ता नेतृत्वमा कहिले पुग्छन् ? तर यसको जवाफ अहिलेसम्म प्राप्त भएको छ जस्तो लाग्छ । अहिले १४ औँ महाधिवेशनको तयारी भइरहँदा युवा पुस्ताहरु नेतृत्वमा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ ।
म त भन्छु दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व परिवर्तनमा युवा हुनुपर्छ र अझ पहिलो पुस्ताको अभिभावकीय भूमिका रहनुपर्छ भन्ने चेत जबसम्म विकसित हुँदैन तबसम्म कांग्रेस आन्तरिक पार्टी सुदृढीकरणमा रुमलिन्छ । आम सर्वसाधरण र कार्यकर्ता पंक्तिमा वर्तमान नेतृत्वबाट सबल कांग्रेस निमार्णको सम्भावना छैन भन्ने धारणा समय–समयमा सुनिएकै हो, त्यसैको परिणाम हो । महाधिवेशनबाट सबै तहको नेतृत्वमा ल्याउन सके पार्टी र मुलुक दुबैलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ नै । आफ्नो सिद्धान्तमा सगरमाथाझैं सदैव अडिग र अटल रहने क्रान्तिद्रष्टा, राष्ट्रवादी, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रप्रति सदैव आस्थावान नेतृत्व आजको खाँचो हो । यसका लागि युवा नेतृत्व हरेक तह र तप्कामा स्थापित गर्नु आम कांग्रेसीको आजको एक मुख्य कार्यभार हो । अब कांग्रेस सच्चिन पर्छ । कांग्रेसमा अहिले गुटउपगुट पनि छँदैछ । यसलाई नामेट पार्ने काम युवापुस्ता आउनैपर्छ । गुट वा छहारीको राजनीतिक घेराबाहिर निस्कनुपर्छ । कांग्रेसको युवापुस्तासम्मलाई ढोका बन्द पनि गरेकै हो । तर पनि युवापुस्ता आउनु सकारात्मक हो । युवापुस्ता आएपछि अबको कांग्रेस सबैको कांग्रेस सबैको प्रतिनिधित्व र आवाज बोक्ने कांग्रेस बन्न सक्नेछ भन्ने विश्वास पनि लिइएको छ ।
अर्काे युवाहरू कहिल्यै पनि पार्टीमा थिति र नीति बसाल्नेतर्फ लागेनन् । अब युवा नेतृत्वमा आए अब उनीहरूले सबैभन्दा पहिले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न पाउनुपर्छ । कुनै पनि गुटमा लागेर शीर्ष नेताहरूबाट नेतृत्वको भिक्षा माग्नुभन्दा एक निश्चित उमेरहद कायम गरी पाका नेताहरूलाई स्वतः बिदाइ गर्ने र युवाले जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । अब कांग्रेसको नेतृत्व युवामय हुन्छ, यसमा कुनै दुईमत छैन । अन्त्यमा, युवा नै देश विकासका आधारशिला भएकाले तिनलाई विदेश पलायनबाट रोकी देशमै उपयोग गर्नेबारे रणनीति बनाउन कांग्रेसले ढिला गर्नु हुन्नँ । कांग्रेसका बूढा नेताको शैली जनताले देखिसकेका छन् । युवा नेताबाट जनताले युवा विचारको अपेक्षा गरेका छन्, युवा विचारको नेतृत्वको अभिलाषा पालेका छन् न कि ठिटो । भ्रम नपालौं, कसैलाई भ्रममा नपारौं । नेपालमा दलका नेताहरूप्रति नागरिकको तहबाट माथि उठेर कार्यकर्ताले घृणा गर्न थालेका छन् । पुरानो पुस्ताले नयाँलाई सराप्छ । नयाँले पुरानोलाई अल्छी र निकम्मा देख्छ । यसरी अघि बढिरहेको कांग्रेस । तर अब यो भ्रम चिरिनेछ । नेपालको राजनीतिको नक्सा भने यस्तै युवाले बदल्न सक्छन् भन्ने आशा पनि पालौं । पार्टीभित्रै टाउकाको पछि दौडिने बानीले कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीति दैनिक चुलिँदै गएको देखिन्छ । यसलाई चिर्न कांग्रेसभित्र युवा नेतृत्व स्थापित हुन सक्नुपर्छ ।